မာတင် Vrijland: သေနတ်သမား Brenton Tarrant (စမ်းချောင်းနထေိုငျ) ခနယူးဇီလန်၏ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူး
သေနတ်သမား Brenton Tarrant (တိုက်ရိုက်စီး) ခနယူးဇီလန်၏ဗီဒီယိုကိုရိုက်ကူး
အတွက် Filed NEWS ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း	by မာတင် Vrijland	မတ်လ 16 2019 အပေါ်	• 14 မှတ်ချက်
တိုက်ရိုက်စီးမှတဆင့်အဆိုပါဗီဒီယိုအားသေနတ်သမား Brenton Tarrant ခနယူးဇီလန်အတွက်ဗလီပေါ်တွင်တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်းရာ၌ခန့်ထားပြီမယ်လို့, (အောက်ခြေကဗီဒီယိုကိုကြည့်ပါ) အလွန်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ငါကဒီမှာပြသချင်တယ်, ဒါကြောင့်သင်ဤတိုက်ခိုက်မှု၏စစ်မှန်မှုကိုအကြောင်းကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဖွဲ့စည်းလို့ရပါတယ်။ ကြှနျတေျာ့အတွက် ယခင်ဆောင်းပါး ငါမြင်ကွင်းတစ်ခုသို့ထိုကဲ့သို့သောအမှုအရာထားရန်တည်ရှိသောအရာကိုအရင်းအမြစ်များကိုပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါ livestreamed ကဗီဒီယိုသောအသွေးကိုပင်အစက်အပြောက်မျက်မှောက်၌ဘယ်နေရာမှာရှိကွောငျးဖျောပွသညျ။ လည်းအကြီးအကျယ်လက်နက်ကိုင်သေနတ်သမားတုံ့ပြန်သတိပေးပင်တစ်စုံတစ်ဦးကမပါဘဲယာဉ်ရပ်နားတိုးမြှင့်။ သငျသညျကလူထိတ်လန့်ထွက်ပြေးနိုင်ရန်မျှော်လင့်ထားလိမ့်မယ်အဖြစ်ခဲ, ဗလီအတွင်းအော်ဟစ်ပုံရှိပါသည်။
၏သင်တန်းကျနော်တို့မီဒီယာမှတဆင့်အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူများ၏ပုံရိပ်များနှင့်ပုံပြင်များနှင့်အတူမှတ်တမ်းတင်ထားသောလိမ့်မည်, သင်မူကားနက်ရှိုင်းသောအတု profile များကိုဖြစ်စေခြင်းငှါနည်းစနစ်ကိုသိနှင့်ပင်ဗီဒီယိုများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုအတုတစ်ခုတစျခုလုံးကိုလူမှုကွန်ယက်မှထည့်သွင်းလျှင်, ငါတို့သည်နေဆဲအတန်ငယ်သတိထားဖြစ်နိုင်သည် သိမ်းကျုံးနှင့်ဆင်ကန်းတောတိုးပြသပုံရိပ်တွေအပေါ်မှီခိုရသောအခါ။ လက်ရှိနည်းပညာနှင့်အတူ, software နှင့်အတုထောက်လှမ်းရေး (AI) ကိုစနစ်များပုံစံတစ်ခုကို Non-ရှိပြီးသားလူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်မဆိုပုံရိပ်ကိုအတုကိုဖန်တီးရန်အသေးအဖွဲလွယ်ကူပါတယ်။ သင်ပင်ရှိနေတဲ့ Real-time မဟုတ်တဲ့တည်ရှိ (နက်ရှိုင်းသောအတု) မျက်နှာတစ်ခုထပ်အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဖြစ်ပြီးအဘယ်သူမျှမကအတုကြောင်းမြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်နေရာတွင်တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူတိုက်ရိုက်အင်တာဗျူးကိုင်ထားနိုင်ပါတယ်။ (အောက်တွင်ဗီဒီယို Watch နှင့်ပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖတ်ပါ)
ကျနော်တို့ Brenton Tarrant အစစ်အမှန်ဟုတ်မဟုတ်မသိရကြ။ သငျသညျဥပမာအားဖြင့်နက်ရှိုင်းအတုမျက်နှာဖန်တီးသောကွောငျ့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို NVIDIAသငျသညျ childishly ရိုးရှင်းတဲ့တစ်ခုလုံးကိုကဗီဒီယိုကိုအတုနိုင်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်အားလုံးတချို့ဆော့ဖ်ဝဲပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည် ဤသည် greenscreen နည်းစနစ်။ ၏သင်တန်းကျနော်တို့တရားနှင့်ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးပုံရိပ်တွေမြင်လိမ့်မည်မျှသံသယပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်လိမ့်မယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းစွာဆိုကဗီဒီယိုသို့မဟုတ်အသံထို့နောက်သေးစစ်မှန်ကြောင်းစစ်ဆေးမယူဆနိုင်ပါ။ ဒါကယုံကြည်မှုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ထို့ကြောင့်အစိုးရက '' အတုသတင်း '' Checker ယုံကြည်မှုပေးအပ်ခံရသဖြင့်သိသာငါတို့လိုလို, သင်မူကားလည်းယခုမိမိအသားကိုယုံကြည်စိတ်ချသူအမဲသတ်သမားကိုလက်ခံရပေမည်။ မိမိအသားကိုငြင်းဆန်ခဲ့သူအမဲသတ်သမားအသွင်အပြင်များသောအားဖြင့်မနှစ်သက်ဆုံးနှင့်ဆိုးရွားပါလိမ့်မယ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ (အောက်တွင်ဗီဒီယို Watch နှင့်ပိုပြီးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖတ်ပါ)
ဒီ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးစာဖတ်သူကိုထံမှတစ်ဦးကတရားမျှတမှတ်ချက်အောက်ပါခဲ့:
အဘယ်မှာရှိတစ်နှစ် 28 ပိုက်ဆံက၎င်း၏အမြင်အဘို့အနိုင်ငံအများအပြားကသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မြေပြင်ပေးဖို့မုန်းဖို့ဥရောပထွက်ပျံသန်းဖို့ရ။ သို့ဖြစ်လျှင်ဤလူကြီးလူကောင်း, ဒါနီးဒင်အတွက်လအနည်းငယ်ကသူ၏အသက်မွေးမှုများကိုတစ်ဦးသေနတ်ပစ်ကလပ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်, ပြီးတော့သည်သူ၏လုပ်ရပ်လုပ်ဖို့ကားတစ်စီးငှားရမ်းပါမည်နည်း ဘယ်လိုအကြွေးကဒ်နဲ့တူတစ်စုံတစ်ဦးပါပဲ။
သို့သော်အဘယ်သို့ငါအရှိဆုံးစဉျးရှာတွေ့နှစ်ခုပစ်ခတ်မှုအကြားအချိန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါ 117မိနစ်နှင့်မိနစ်ကြား၏။ အကွာအဝေး6ကီလိုမီတာအကြောင်း, ဒါပေမယ့်သင်ကကားထဲတွင်ပထမဦးဆုံးဗလီကနေရပြီးတော့ (ကားတစ်စီးနှင့်လာမည့်ဗလီမှပေါ်) ကယူသှားဖို့လိုအပျပါလျှင်ဤအချိန်ကာလအတွင်းအလုံအလောက်ပါသလဲ
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယနေ့ကဒီမှာနေထိုင်နေကြသောကြောင့်တဖန်ငါလမ်းကြောင်းယူချင်တယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, များစွာသောလမ်းများရုတ်တရက်ပထမဦးဆုံးသေနတ်ပစ်၏ဗလီန်းကျင်ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကိုယ့်ရက်သတ္တပတ်၏သင်တန်း၌ချင်တယ်, ဒီ6ကီလိုမီတာ (တစ်ဦးကသောကြာနေ့တွင်) ကို7မိနစ်အတွင်းဖုံးလွှမ်းစေနိုင်သည်ဆိုပါကကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
သင်ဆဲအကြောင်းကိုပိုင်ဆိုင်လုပ်ပါ။ ပြန်အကျွမ်းတဝင်ဖို့ကလို ပြဿနာ, တုံ့ပြန်မှု, ဖြေရှင်းချက် ဂိမ်းကို run? မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ဒီအသီးအသီးကိုအခြားဆန့်ကျင်သောလူဦးရေလှုံ့ဆော်ပစ်ခတ်မှုစေတယ်။ သြစတြေးလျအထက်လွှတ်တော်အမတ် Fraser Anning , မကြာမီပစ်ခတ်မှုအပြီးအပြစ်တင်ဖို့မွတ်စလင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုပေး၏။ ထိုအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောထမ်းဘိုးကိုအလိုရှိသောစီးဆင်းမှုထုတ်ပေးကြောင်းဒါငါ့တွေ့မြင် (ပုတဲ့ဝိရောဓိကိုနှိုးဆော်စေခြင်းငှါအကြံအဖန်ဖြစ်ဟန် ယခင်ဆောင်းပါး) ။ ဤသည်ပေါင်းစပ်ဖို့ရာအတွက်ပေါင်းစပ်နဲ့ anti-စာတမ်းခဲ Hegelian စကားဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင်ကဘက်ထရီတစ်စီးကို generate တစ်ပေါင်းနှင့်အနုတ်တိုင်လိုအပ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းဝိရောဓိလည်းတမင်တကာကြီးမားပေါင်းနှင့်အနုတ်ထမ်းဘိုးကိုတက်ထိုးယပ်ခတ်နေကြသည်။ ဒါက (PSYOP) ဖွစျနိုငျစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆင်ရေးမှတဆင့်ဒဏ်ငွေပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့တရားစီရင်တော်မူ။
ဗွီဒီယိုကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖယ်ရှားလြှငျ, နှိပျပါ ဒီ link ကို.
source link ကို entries တွေကို: theguardian.com
ရောဘတ် Jensen တို့ကအာနိုး Karskens '' လူမည်းစာအုပ် NOS သတင်း "ထိန်းချုပ်ထားသောအတိုက်အခံပြပွဲ: ဥယျာဉ်ကိုပျက်ကွက်
နေ့စဉ်တီဗီစီးရီးသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုလော့? ထိုအခါသင်သည်အပြည့်အဝ hypnosis အောက်မှာယူအချိန်နှင့်အလေးအနက်မရ
သုတေသန NIS နှင့်ရဲမှားယွင်းသောသက်သေအထောက်အထားစေကွောငျးဖျောပွသနှင့်မည်သို့တစ်ဦးစှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြမဟုတ်မမှန်ကြေညာစေခြင်းငှါ
သင် script ကိုမှတဆင့်ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာဒါဟာအနာဂတ်ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်: တစ် Nostradamus ဖြစ်လာ
Tags:: ဓါတ်ပုံတွေ, Brenton, ခနယူး, အထူးပြုလုပ်ထားသော, ဗီဒီယိုဖိုင်, Fraser Anning, အသက်ရှင်သော, ဗလီ, သေနတ်ပစ်, မီးခိုးရဲ့, စမ်းချောင်း, Tarrant, ဗီဒီယို, Zeeland
့ Yuri Goosen wrote:
16 မှမတ်လ 2019 20: 22
ငါမူရင်းပုံရိပ်တွေကိုမြင်သောအခါငါတစ်ချိန်ကတံခါးဝ၌မပေမယ့်နောက်ကျောကိုရှာဖွေနေတဦးတည်းအချိန်ပိုမိုငါကလူအများ၏အနည်းငယ်လိုက်တယ်အပြုအမူတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သို့ငါထူးဆန်းတဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပထမဦးဆုံးရိုက်ချက်များပြီးနောက်နေဆဲလူအုပျစုဗလီထဲမှာစုဝေးကြ၏နေကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။ ကောင်းပြီ shok လိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့်လူတိုင်းအတွက်မှာနောက်ဆုံးတစ်အပူရိုက်ချက်ပေးထားတယျ။ အသစ်ပုံရိပ်တွေရုတ်တရက်မသေဘဲကျန်ရစ်သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်နှင့်မျှမကျည်ဆန်ပေါက်တွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ Dooer မကောင်းတဲ့ရိုက်ကူးရနိုင်သည်။ သို့သော်သေအချာပါကမှားယွင်းသောအလံပုံရသည်အမှန်ပင်ဖြစ်ပါသည်!
17 မှမတ်လ 2019 10: 33
ငါစက္ကန့်အတွင်းမှာပဲ Vimeo.com ပေါ်မှာဤ (ဖျက်ပစ်ဗီဒီယို) ငါ၏အတစ်ခုလုံးကိုအကောင့်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်ထားကြ၏။
17 မှမတ်လ 2019 16: 09
17 မှမတ်လ 2019 21: 22
ကြှနျတေျာ့အမွငျဟာအံ့ဆဲဆဲဒေါ်လာစျေး၏ပြိုကျခြင်းနှင့် Trump ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်သည့် psyop, ထိန်းချုပ်ထားသောကြောင့်ငါနဲ့ဆက်နွယ်သောဗီဒီယို QAnon အတွက်အထူးလေးနက်စွာထိုမှတပါး QAnon မိတ်ဆက်ခြင်းကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုနဲ့ဝေးကှာသှား။
16 မှမတ်လ 2019 21: 15
ကြေးနန်းသတင်းထောက်အကြောင်းကြားရမည်တစ်သတင်းထောက်မိန်းကလေးအဖြစ်နောက်ခံရေတွင်းတစ်တွင်း-ကောငျးအလှနျအသီးပန်းကန်နှင့်ဒတ်ခ်ျပန်းပွင့်ဖို့ပြောနေတာအီဗာ Gabeler ဟာဧဝကသို့မဟုတ်မသောအရာကိုပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ပါဘူး, ရွံရှာဖွယ်များနှင့်မကြုံစဖူးပြောတတ်? သငျသညျအကြှနျုပျတို့တှေ့မွငျရကြပြီမဟုတ်ထင် dan..die ။ အီဗာကသူ့ကိုသှားပွီး။ ပွုံးသူမကစိတ်လှုပ်ရှားကြောင်းအတိအကျမဟုတ်ဖေါ်ပြခြင်းတစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောမင်းသမီးပုံရသည်။
ရိုက်ကူး paintball ကလပ်၏တစ်ဦးက paintball နေ့လည်ခင်း ပို. ပင်ပြင်းထန်သောထုတ်ကြည့်ပါတယ်။ အားလုံးရွေးချယ်စရာမှလက်ပေါ်ကြောင့်သင်တို့ကိုနားမလည်ကြဘူး
16 မှမတ်လ 2019 23: 33
သတိထားဖြစ်ခြင်း (ဖြစ်ကောင်း) (သူတို့ထို့နောက်သူကရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြောင့်အစစ်အမှန်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးဖျောပွခဲ့ကြောင်းဆိုကြသည်နိုင်သည်) သို့သော်လုပ်မရ။ အဆိုပါဗီဒီယိုထဲမှာလူများ၏အရေအတွက်မှာထိုမှတပါး, 100 ရှိပါလိမ့်မယ်, အပေါ်ကဂဏန်းမှားဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျလက်နက်များကျွမ်းကျင်သူကဤလက်နက်များပုံမှန်ပါသညျဘယ်သို့သောအကြောင်းသူတို့ရဲ့ပြောဆိုနိုင်ပါသည်။
ထိုအဖြစ်ကောင်းနယူးဇီလန်, ကသငျသညျအရာတစ်ခုခုကိုမျှော်လင့်ထားရှိရာနောက်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အကြောင်းမူကား, သာလအနည်းငယ်ဖြစ်။ သူကအဲဒီမှာဘာဖြစ်သွားပါကဘယ်နေရာမှာမဆိုဖြစ်ပျက်နိုင်ပါတယ်။
16 မှမတ်လ 2019 23: 48
မနေ့ကနဲ့ဒီနေ့ဗလီရောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်အမျိုးမျိုးသောလမ်းညွန်ကနေ access ကို (vrijdal ဒီပြီးသားကိစ္စဖြစ်ခဲ့သည် ??) လမ်းအကျင့်ကိုကျင့်၏ရလဒ်အဖြစ်ပိတ်ထားပြီ။ ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲပဲကြိုးစားသင့်ပါတယ်။
17 မှမတ်လ 2019 02: 12
အဆိုပါသံတော်ဆင့်သေနတ်သမားဟာရိုက်ကူး 17 မိနစ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ဒါကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ပစ္စည်းပစ္စယတဲ့ Carl Pomare အလုပ်သမားရေးရာ Naki ငှါးဘို့မန်နေဂျာအခင်းဖြစ်ပွားရာပေါ်ပထမဦးဆုံးကလူတဦးဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သူ 1.40pm ပတ်သက်. ဗလီခြင်းဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်အပြေးလူမျိုး၏တစ်ဖွဲ့လုံးတွေအများကြီးကိုမြင်လျှင်ခဲ့သည်။ သူကရိုက်ချက်များလျင်မြန်စွာမီးနှင့်မြေပြင်နှိပ်လူတွေကိုမှာချွတ်မယ်ကြား၏။
အဆိုပါသံတော်ဆင့်ဒုတိယသေနတ်သမား Linwood ရဲ့ Masjid ဗလီအနီး beenseen ထားပါတယ်သတင်းပို့သည်။ TV3 ရဲ့ Newshub မျက်မြင်သက်သေများရှိဗလီထဲသို့ပြေးတစ်ဦးသေနတ်သမားကိုမြင်လျှင်အစီရင်ခံကပြောပါတယ်။
ဒီတော့ 1.40 အကြောင်းကိုခဲ့ 17 မိနစ်တိုက်ရိုက်စီးနှင့်အတူပထမဦးဆုံးဗလီမှာစတင်ခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်သေနတ်သမားရုံ2နာရီမတိုင်မီဒုတိယဗလီမှမောင်းထုတ်ခံရဖို့သာထို့နောက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်အရာကိုအချိန်ဒုတိယပစ်ခတ်မှုအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြသလဲ?
17 မှမတ်လ 2019 02: 36
ရဲ Linwood Masjid ဗလီမှာတစ်စက္ကန့်ပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါသည်ပြောပါတယ်။
မာကု Nichols သူတွေအကြောင်းငါးခုသေနတ်သံတွေကြားနယူးဇီလန်သံတော်ဆင့်သို့ပြောသည်နှင့်သောကြာနေ့ဆုတောင်းပဌနာ-goer တစ်ရိုင်ဖယ်သို့မဟုတ် ShotGun နှင့်အတူမီးပြန်ရောက်သည်။
မစ္စတာ Nichols သူထမ်းစင်ပေါ်တွင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိနှစ်ခုဒဏ်ရာရသူကလူကသူ့မော်တော်ကားဆိုင် fit မြင်နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်လူအသကျရှငျဖြစ်သည်ထင်ရှားသူကပြောပါတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုတောငျးခကျြ 10 မိနစ်သို့ခဲ့ကြသည်, ပြီးတော့ကျနော်တို့အပြင်ဘက်သေနတ်ရိုက်ချက်များကိုကြားပေမယ့်ဆုတောငျးလပေါ်တွင်ထားရှိမည်။ Next ကိုတစ်မိနစ်, င်းအတွင်းသို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ သူကတစ်ဦးအလင်း-ရောင်စုံအသားအရေကောင်လေးနှင့်သူပစ်ခတ်စတင်ငါတို့ရှိသမျှသည်အဖုံးအဘို့အသွား၏။
ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးသေနတ်ပစ်ကဗီဒီယိုပစ္စည်း 17 မိနစ်အထဲကနှုတ်ယူနှင့် ron 1.40 စတင်သောအခါ - 1.45 (ဆုတောင်းပဌနာမပြုမီ 15 မိနစ်တိကျမ်းစာ၌လာသည်ကား) နှင့်လေးသမားရပါမည်နေရောင် 10 မိနစ်ထက်ပဌနာ anvag ပြီးနောက်ဒုတိယ 10 မိနစ် A ကနေခရပြုကြပြီ
အခြားအဗလီ (အလားအလာပစ်မှတ်) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူနာရီဝက်အတွင်းအဘယ်သူမျှမလုံလောက်သောအစီအမံတှေရှိခဲ့ကြပြီလည်းထူးဆန်း
17 မှမတ်လ 2019 10: 51
17 မှမတ်လ 2019 12: 52
17 မှမတ်လ 2019 13: 43
ထို့ကြောင့်ယင်း Vimeo အကောင့်ငါစက္ကန့် werd..weg ဗီဒီယိုများအတွင်းအနှစ်အဘို့ထိုသူတို့ပိတ်လိုက်တယ်။
ဆင်ဆာ! Geroge အော်ဝဲလ် ...
17 မှမတ်လ 2019 17: 07
1 မှဧပြီလ 2019 20: 11
N ကို Wardinski
သတင်းအချက်အလက်ဖို့ချက်ချင်း access ကိုသင်သီချင်းမှဖြစ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုသည်မှာစိတ်ချပါနိုင်ပြီးဆီးအတားဖြစ်ပါတယ်။
« ခနယူးဇီလန်နှစ်ခုဗလီအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုဦးသေဆုံး 49
Brenton Harrison Tarrant ညာဘက် Anti-အကြမ်းဖက်ဝါဒတူရကီ၏နိဒါန်းကိုရပ်တန့်သလဲ? »